Wakiilka Muranka Badan Dhaliya Ee Paul Pogba Ee Mino Raiola Oo Balan-Qaad Manchester United Wadne Xanuun Ku Ridaya U Sameeyay Xiddiga Uu Wakiilka Ka Yahay. – GOOL24.NET
Wakiilka ree Talyaani ee Mino Raiola oo ah wakiilka xiddiga Manchester United ee Paul Pogba ayaa balan-qaad qalbi jab ku noqday Manchester United u sameeyay xiddiga uu wakiilka u yahay, Wakiilkan ayaa ah shaqsiga ay dad badani u qabaan inuu yahay midka Pogba ku riixaya inuu iskaga baxo United.
Xidhiidhka kasoo dhaxeeyay Paul Pogba iyo tababarihiisa Jose Mourinho ayaa ahaa mid mudooyinkii ugu dambeeyay aan fiicnayn iyadoo qaab ciyaareedka Pogba uu hoos u dhac weyni ku yimid tababaraha ree Portugal-na abaal marin uga dhigay kursiga keydka.
Haddaba, Sida ay daaha ka qaaday Manchester Evening News wakiil Mino Raiola ayaa u balan qaaday xiddigiisa inuu geyn doono mid kamid ah kooxaha ree Spain gaar ahaan kooxaha horyaalkaas ugu waaweyn ee Barcelona iyo Real Madrid.
Manchester Evening News ayaa sheegaysa in Mr Raiola uu u sheegay 25 jirkan “Saddex sano kaddib Spain” hadalkan ayuu micnihiisu yahay inuu u wareejin doono dhinaca horyaalka La Liga gaar kaddib saddex sano oo uu ku qaadanayo Manchester United.
Pogba ayaa lala xidhiidhinayay inuu u dhaqaaqo dhinaca kooxda Real Madrid kahor intii uusan kusoo biirin Red Devils, Dhinaca kale xiddigan ayaa xiiso ka helayay Barcelona suuqii xagaagan oo dhan si ay ugu buuxiyaan booskii Andres Iniesta.
Si kastaba ha ahaatee, Iyadoo Pogba uu haatan ku jiro sanadkiisii saddexaad ee United waxa la arki doonaa haddii wakiilkiisa oo door xoogan kuleh go’aanadiisu uu awoodi doono inuu dhammaadka xilli ciyaareedkan u kaxayn doono xiddigiisa dhinaca La Liga.